Adeegyada 'GYN Services' waxaa ka mid ah Imtixaanka Sannadlaha ah ee Dumarka Fiican, baaritaanka Pap Smear
FCHC waxay siisaa bukaanada leh adeegyo xirfad leh, naxariis leh.
Imtixaanka Dumarka ee Sannadlaha ah oo loo beddelo Tilmaamaha Pap Smear
Laga soo bilaabo Kulliyadda Maraykanka ee Dhakhaatiirta Haweenka iyo Haweenka ("ACOG")
Qiimeynta caafimaadka ee sanadlaha ah (“imtixaan sanadle ah”) Waa qayb aasaasi ah oo daryeelka caafimaadka ah waxayna qiimo u leedahay kor u qaadida dhaqamada kahortaga, garashada waxyaabaha halista u ah cudurada, ogaanshaha dhibaatooyinka caafimaad, iyo sameynta xiriirka bukaan socodka iyo bukaanka.
Macluumaad dheeraad ah? Tilmaamaha Caafimaadka iyo Daabacadaha / Fikradaha Guddiga / Guddiga Dhaqanka Haweenka / Booqashada Haweeney Wanaagsan
Pap Smear (smear ilmo galeenka, ama smear test) waa hab lagu baaro afka ilmo-galeenka oo loo isticmaalo in lagu ogaado kansarka ka hor iyo geedi socodka kansarka ee afka ilmo-galeenka. Baaritaanku wuu soo muuqan karaa aan caadi ahayn natiijooyinka marka haweeneydu caafimaad qabto ama caadiga ah wuxuu keenaa haweeney cilladaha makaanka afkiisa - 25% waqtiga. Waxay xitaa waayi kartaa ilaa 5% kansarka ku dhaca makaanka afkiisa.
Tilmaamaha AGOG: Immisa jeer ayaan qaadaa baaritaanka kansarka xubinta taranka dumarka iyo baaritaanadee ayaan sameeyaa?
Imisa jeer iyo baaritaankee ayey kuxirantahay da'daada iyo taariikhdaada caafimaad
Haweenka da'doodu tahay 21-29 sano waa inay maraan baaritaanka Pap Smear kaligood 3dii sanoba mar. Tijaabada HPV laguma talinayo.
Haweenka jira 30-65 sano waa inay maraan baaritaanka Pap Smear iyo HPV (wada-imtixaanid) 5tii sanaba mar (doorbido). Sidoo kale waa la aqbali karaa in lagaa qaado baaritaanka Pap Smear kaligiis 3-dii sanoba.
Macluumaad dheeraad ah? Baaritaanka Kansarka Ilmo-galeenka
KA HOR imtixaankaaga sanadlaha ah si loo hubiyo natiijooyinka la isku halleyn karo
KA fogow galmo maalin ka hor baaritaanka
KA QAADO huleelada 48 saacadood baaritaanka ka hor
OGOOW waxyaabaha soo socda: (mowduucyadan waxay ku habboon yihiin tarjumaadda baaritaanka Pap test, gaar ahaan haddii wax aan caadi ahayn la ogaado)
taariikhda iyo natiijooyinka baaritaanka Pap Smear ee kuugu dambeeyay
taariikhda baaritaannada aan caadiga ahayn ee Pap Smear
taariikhda caadada ugu dambaysay iyo wax kasta oo aan caadi ahayn
isticmaalka hoormoonka iyo xakameynta dhalmada
taariikhda qoyska ee cudurada dumarka
GUJI KADDHIGA isla markiiba ka hor baaritaanka Pap Smear si looga fogaado raaxo la'aanta inta lagu jiro howsha.
KADIB imtixaankaaga sanadlaha ah
Dhiigbax afka ilmo-galeenka oo aan waxyeello lahayn ayaa suurtagal ah isla marka baaritaanka kadib
dumarka qaar ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay isticmaalaan maro nadiif ah
u hoggaansamaan Tilmaamaha takhtarka booqashooyinka dabagalka ah iyo wixii tijaabo ah ee loo baahan yahay
Ma rabtaa inaad waxbadan ka barato? Hubi our Kheyraadka Caafimaadka Haweenka Page
Daaweynta Natiijooyinka Pap Smear aan caadi ahayn
Diyaarinta galinta IUD
Balanqaadyada 'IUD's' ayaa sida ugu wanaagsan loo qorsheeyay inta u dhexeysa maalinta 5 iyo 9 ee wareeggaaga. (xisaabi bilowga wareeggaaga maalinta ugu horreysa ee dhiigaaga caadada).
Qorshee inaad joogtid xarunta 1 ilaa 1 1/2 saacadood
KAhor intaadan ballanta gelinta IUD
Ka fogow galmada maalin ka hor galinta
Ka fogow boomaatada 48 saacadood kahor gelinta
Ka fogow kiriimyada siilka ama daawooyinka usbuuc ka hor gelinta
Si fudud wax u cun ballantaada ka hor
Qaado Tylenol ama Motrin 30 daqiiqo kahor waqtiga ballantaada
KADIB ballantaada galinta IUD
Dareemida dhib la'aanta ama dhiig-baxa iyo casiraad dhexdhexaad ilaa fudeyd ayaa suurtagal ah isla markiiba ka dib; dumarka qaar ayaa laga yaabaa inay u baahdaan inay isticmaalaan maro nadiif ah.
Sidoo kale waa inaad hubisaa inaad u hoggaansamayso tilmaamaha takhtarka ee booqashooyinka la socoshada ah.
In kastoo isla markiiba lagaa ilaalin doono waxaa lagugula talinayaa inaad ka fogaato Waxqabadka Galmada muddo 3 maalmood ah.